Patrick Chinamasa Zimbabwe's Finance Minister
Finance Minister Patrick Chinamasa, in Washington this week for the annual World Bank and International Monetary Fund meetings, reiterated earlier statements that his country is sticking with the US dollar, until the economic situation improves.
The finance minister, who said Zimbabwe is not on the agenda for the World Bank and IMF meetings, sought to dispel what he calls the misconception that most African countries, including the cash-strapped Zimbabwe, bring begging bowls to the Bretton Woods institutes, when they come for these meetings.
In an exclusive interview with Marvellous Mhlanga-Nyahuye of VOA’s Zimbabwe Service, Chinamasa castigated the West for failing to lift the economic sanctions targeted on President Robert Mugabe and members of his inner circle, for alleged human rights abuses and flawed elections.
In explaining why Zimbabwe will not be reverting to its own currency anytime soon, Chinamasa blamed sanctions, but also government policies, which he says will be revised soon, to be more investor-friendly.
Interview With Hon Patrick Chinamasa